टिकटकमा रमाईरहेका खतरनाक जुम्ल्याहा दिदीबहिनी गंगा जमुनाको योन्जन,एउटै मण्डपबाट बिहे साथै श्रीमानसंग ! टवाइलेट जादापनि संगै जाने !!(हेर्नुहोस भिडियो ) – News Nepali Dainik
टिकटकमा रमाईरहेका खतरनाक जुम्ल्याहा दिदीबहिनी गंगा जमुनाको योन्जन,एउटै मण्डपबाट बिहे साथै श्रीमानसंग ! टवाइलेट जादापनि संगै जाने !!(हेर्नुहोस भिडियो )
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, फाल्गुण ०७, २०७७ समय: २३:०२:०१
पछिल्लो समय टिकटकले चारैतिर माहोल जमाईरहेको छ टिकटकबाट कोही स्टार बनेका छन त कोही घरबार पनि बनेको छ भन्दा फरकै पर्दैन । यहि टिकटकलेनै चर्चित जुम्ल्याहाको जोडीलाई म्युजिक क्षेत्रमा परिचित बनायो भने गुल्मीका टयालेन्टेड जुम्ल्याहा दिदीबहिन पनि आफनो स्थान बनाउन सफल भएका छन ।
हो आज हामी उनै टिकटकमा रमाईरहेका खतरनाक जुम्ल्याहा दिदीबहिनी गंगा जमुना योन्जनको बारेमा कुरा गर्दैछौ। गोरखा चरिकोटका यि २ युवतीको इच्छा पनि अचम्म अचम्म लाग्दा छन, अचम्मका कुरा अचम्मका बानी ब्यवहोरा छन।
जहा गएपनि स“गै जाने यि २ बहिनि एकदमै आफूलाई लिएर प्रोटेक्टिभ छन र छुटयाउन पनि सबैलाई गारो पनि हुन्छ।
अनुहार देखि हरेक कुरा सेम सेम भएका यि २ बहिनीको इच्छा एउटै मण्डपबाट एउटै श्रीमानस“ग पनि बिहे गर्ने छ कि भनेर सोध्दा मण्डप सेम तर बेहुला फरक फरक हुने भन्दै हसाउनु हसाए पनि । लोक दोहोरीमा संघर्ष गरिरहेका २ बहिनीका यि खतरनाक हर्कत देख्दा जो कोही पनि चकित पर्छन, हेर्नुहोस —
Last Updated on: February 19th, 2021 at 11:02 pm